Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad lagu maamuusay furitaanka Akadimiyada Xirsi Mahad oo lagu qabtay xerada Dhadhaab
Xaflad lagu maamuusay furitaanka Akadimiyada Xirsi Mahad oo lagu qabtay xerada Dhadhaab
Posted by ONA Admin	/ January 2, 2014
Maanta oo ay taariikhdu ku beegnayd 2/1/14 waxaa xaflad furitaan ah lagu qabtay gudaha madarasada Akadimiyada Xirsi Mahad (Hirsi Mahad Academy) ee kutaala xerada Dhagaxlay. Xafladan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulaha iyo macalimiinta madarasada ayaa waxaa kasoo qayb kalay dhamaan ardayda dhigata madarasada iyo waalidiinta iyo waliba gudiga waalidiinta.
Xafladan oo ahayd furitaankii madarasada oo xidhnayd mudooyinkii u danbeeyay ayaa sidoo kale ardaydii mustawaha 1aad 2aad iyo 3aad galay lagu gudoonsiinayay abaal marino kala duwan oo buugaag, qalimaan iyo abaal marino kale isugu jira waxaana goobta abaal marino lagu gudoonsiiyay arday badan oo kalimahaas soo gashay sidoo kale waxaa abaal marinadan oo kale lagudoonsiiyay ardayda anshaxa lagu qiimeeyay iyo kuwo dadaal kale lagu qiimeeyay.
Madarasada HIRSI MAHAD ACADEMY ayaa waxaa dhigta ciyaalka da’doodu yartahay ee kasoo qaxay wadanka Ogadenia gaar ahaan kuwa agoonta iyo danyarta ah waxayna noqotay madarasada ugu horaysa marka laga hadlayo wax qabadka umada ree Ogadenia ee ku dhaqan Dhadhaab. Madarasada Xirsi Mahad oo kadhisan sadexda xero qoxooti ee kala ah Ifo, Dhagaxlay iyo Xagardheereayaa waxaa ka aflaxay arday aad ubadan oo barta duruusta diiniga ah iyo maadigaba.
Waalidiinta oo xaflada kahadlay ayaa aad ugu mahadceliyay macalimiita iyo maamulahaba waxayna aad ugu baraarujiyeen ardaydii in ay wax barashadooda sii hormariyaan. Dhanka kale waxaa goobta kahadlay gudiga waalidiinta oo khudbado qiima gal ah kuna saabsan sidii loo hormarinlahaa wax barashada kajeediyay.
Guntii iyo gaba gabadii waxaa xaflada soo xidhay maamulaha madarasada XIRSI MAHAD mudane sh Axmad Daahir oo isna khudbad gaaban kajeediyay goobta ayaa ka xogwaramay xaaladda Akadimiyada iyo heerka waxbarasho ee ardayda iyo baahidooda, isagoo walidka kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada ubadka. Waxaa kaloo uu ugu baaqay dadweynaha Somalida Ogadenya ee qurbaha joogta inay daboolaan baahida ardayda agoonta ah iyo qoysaska danyarta ah ee dhigata madrasada, taasoo aakhira iyo aduunkaba.